SHIR LOOGA HADLAYAY ABAARAHA KA TAAGAN GOBOLLADA DHEXE OO KA DHACAY MUQDISHO
Shir ay soo qaban qaabisay dalladda Towfiiq oo ay ku bahoobeen NGO-yo Soomaaliyeed oo kala ah: Community Concern Somalia (CCS), ANFAC iyo SAWDO, iyadoo dalladdaan loogu tala galay inay wax ka qabato dhibaatada ka taagan gobollada dhexe gaar ahaan Gobolka Gal-guduud, waxaana ugu horreyn ka hadlay shirkaas xubin ka tirsan Dalladda Towqiif oo booqasho ku soo maray goobaha ay abaaruhu ka dhaceen ee gobolka Galguduud; Mudane Ibraahim Jaamac Cigaal (Howle) isagoo sheegay inay halkaas ka taagan yihiin abaaro xoog leh, kuwaasoo dhaxalsiiyay gobolka inay baaba’aan xoolihii iyo dadkii ku noolaa, dhibaatooyinka gobolka ka jira ayuu sheegay inay isugu jiraan biyo iyo baad la’aan xoog leh, waxaana abaarahaasi ay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysteen in ka badan 50-kun oo qoys, iyadoo ay sii siyaadayaan dadka ku waxyeelloobaya abaaraha ka tagaan gobolladaas.
Dhanka kale, waxaa kulankaan ka soo qayb galay odayaasha deegaanka Gobollada dhexe iyagoo sheegay in dhibaatada halkaas ka taagan ay tahay mid saameysay dhamaan dadka ku dhaqan gobollada dhexe, waxayna sheegeen odayaashu in aysan jirin gargaar la geeyay ilaa iyo hadda gobolladaas, balse ay dalladda Towfiiq ay hadda dadaal ugu jirto inay goobahaas gayso gargaar bani’aamnimo. Sidoo kale waxaa ka jira gobolladda dhexe, gaar ahaan gobolka Galguduud biyo la’aan xoogga, iyadoo markii horebay aysan gobollada dhexe lahayn webiyo, balse ay dadkaasi isticmaalin jireen barkado biyo lagu shubo iyo ceel lagu qoday riigag, kuwaasoo biyahoodu hoos u dhac badan ku yimid roob la’aanta awgeed, qaarkoodna ay baaba’een kaddib markii ay matoorradii kharaabeen wax dayactir ahna loo waayay. odyaashii ka hadlay kulankaas waxaa ka mid ah: Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Sarmaale, Xaashi Xirsi Maalin (Xaashi Laba jir) oo ahaa isu duwihii biyaha gobolka Gal-guduud, waxaa kaloo hadlay Sheekh Maxamuud Deylaaf oo ka soo jeediyay maanso ama suugaan ALLA bari ah iyo xubno kale.
Ugu dambeyn waxaa kulankaas ka hadlay guddoomiyaha Dalladda Towfiiq ahna guddoomiyaha CCS mudane C/nuur Xaaji Maxamed oo sheegay in dalladda Towfiiq ay wax badan ka qaban doonto iyadoo la kaashanaysa hay’adaha caalamiga ah dhibaatada abaaro ee ka taagan gobolka Gal-guduud, guddoomiyuhu wuxuu u mahadceliyay Madaxa Hy’adda UNDP Mr. Maxwell Geylar iyo saraakiishii Soomaaliyeed oo dhawaan kormeer howleed ku tagay gobollada dhexe, soona hubiyay wax yeellada ay abaaruhu ku hayaan gobolladaas, wuxuu kaloo u mahad celiyay hay’adihii booqday goobahaas abaaruhu ka jiraan sida: ICRC, CARE, CONCERN, WFP iyo kuwa kale ee Waddaniga ah.